Human Right Watch oo maamulka Somaliland ugu baaqdey in si degdeg ah ujoojiso masaafurinta itoobiyaanka. - Horseed Media
Human Right Watch oo maamulka Somaliland ugu baaqdey in si degdeg ah ujoojiso masaafurinta itoobiyaanka. September 5, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogle Hay’adda Xuquuqal-insaanka u dooda ee Human Rights Watch, ayaa madaxda Somaliland ugu baaqday inay si degdeg ah u joojiyaan qaxoonti iyo magangelyo-doonayaal Itoobiyaan ah oo ay dib ugu celinayso dalkooda.
Qoraal dheer oo ay kasoo saartey Hay’adu xafiiskooda Nairobi,ayeey ku sheegtey in koox itoobiyaan ah, una badan dumar iyo carruur lagu khasbay inay ku noqdaan Itoobiya.
Human Rights Watch waxay sheegtay in taasi meel-ka-dhac ku tahay Shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaysa in dad loo diro meel laga yaabo inay kala kulmaan xukun ama waxyaabo khatar ku ah noloshooda.
Warbixintu waxay sheegtay in maamulka Somaliland mastaafurisay dad xidhan oo Itoobiyaan ah, ka dib markii siday hay’addu sheegtay Boolisku 30-kii iyo 31-kii bisha weerareen goob aan rasmi ahayn oo ay degenaayeen, loona yaqaano xarunta Daryeelka Bulshada oo ku taala magaalada Hargeysa, halkaasoo ay boqolaal magangelyo-doona iyo soo-gelooti Itoobiyaan ahi ay ugu yaraan sannad ku noolaayeen.
Hay’ada Human Rights Watch oo soo xiganaysa dad goobjoogeyaal ah, waxay sheegtay in ilaa 100 qof oo dadkaas ka mid ah xuduudka labada dal laga talaabiyay.iyadoo dabayaaqadii bishii December 2011, maamulka Somaliland waxay isku dayday inay khasab ku celiso 20 qof oo magangelyo raadis iyo qaxoonti isugu jira, ayna xidho xaruntaa Daryeelka Bulshada.
“Qabashada iyo mastaafurinta magangelyo-doonku maaha jid lagu dhawrayo dadka nugul ee raadinaya inay Somaliland ilaaliso,” ayuu yirei Leslie Lefkow oo ah kuxigeenka Agaasimaha Human Rights Watch u qaabilsan Afrika.
Waxa uu sheegay in madaxda Somaliland looga baahan yahay inay xaqiijiyaan in Itoobiyaanka magangelyo-doonka ah la diiwaangeliyo, lana siiyo ilaalinta iyo caawinta ay xaqa u leeyihiin.
Sidoo kale Hay’addu waxay walaac ka muujisay talaabada lagula dhaqmay dadkaas, waxayna sheegtay in subaxnimadii 30-kii August ay mulkiileyaasha dhulka ku hareeraysan goobta (Social Welfare Centre) ay u sheegeen Itoobiyaanka goobtaas ku nooli inay ka guuraan.
Balse, waxay sheegtay in markii ay diideen uu iska-horimaad ka dhex qarxay, isla markaana uu ciidan Boolis ahi goobtaas tegay. Sidoo kale, warbixintu waxay sheegtay in rasaas ay Boolisku rideen ay ku dhaawacmeen lix qof oo Itoobiyaan ahi, kaasoo midkood lugta ay ka toogteen, iyadoo rabshadaasi sidoo kale dhalisay dhaawaca afar sarkaal oo Booliska ka tirsan.
Hay’addu waxa kale oo ay sheegtay in Boolisku xidheen 56 qof oo ay ku jireen badi inta dhaawacantay, iyagoo ku kala xidhey saldhigyo kala duwan oo ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta Somalilan,iyadoo 25 qaxooti ahaan uu shraciyeysnaa iyo 2 kale oo magangalyo doon soo galooti ah ku xidhey xabsiga dhexe ee magaalada.
Mid kamid ah dadka ku xirnaa xabsiga ayaa Human Right Watch u sheegey in lixda kale ee dhaawacantey aaney helin wax daawo ah ilaa sadex beri kadib sii deyntoodii.